Iindaba -I-PCB Khuphela ubuNjineli usebenzisa ibhodi yesekethe eprintiweyo
I-PCB Khuphela ubuNjineli usebenzisa ibhodi yesekethe eprintiweyo emininzi
1, i-PCB Khuphela ubuNjineli usebenzisa ibhodi yesekethe eprintiweyo
Oku kunokufunyanwa kulwakhiwo lwempembelelo efanelekileyo yokukhusela: umaleko ophakathi welayini yamandla okanye umhlaba, umbane otywiniweyo ebhodini, omabini amacala onyango lokugquma, unokuhamba ngophazamiseko olusezantsi nolusezantsi aluchaphazeli nganye enye; Uluhlu lwangaphakathi olwenziwe kwindawo enkulu yendawo eqhubayo, iingcingo zinamandla amakhulu embane phakathi kokuyilwa kwebhodi yekopi yesekethe yokuhambisa umbane, enokuthintela imitha yebhodi yesekethe kwaye ifumane ingxolo.
2, i-PCB Khuphela ubuNjineli kwizixhobo ezikhethwe ngononophelo
Ukhetho kufuneka luqwalasele ukwaluphala kwezinto, kwaye ukhethe ubushushu bokushisa okwaneleyo kwebhodi encinci yekopi. Kwiisekethe ezihamba rhoqo, kufanelekile ukuba usebenzise ifilimu ukunciphisa imitha yesekethe. Kukhetho lwezixhobo ezinengqondo, ukuqwalasela ngokupheleleyo izikhombisi zomda wengxolo, kungcono ukusebenzisa i-HTL, ukuba zombini amandla okusetyenziswa, ukusetyenziswa kweVDD-15V CMOS kufanelekile.
3, ikopi ye-PCB yobunjineli bebhodi yesekethe eprintiweyo "umhlaba opheleleyo"
Xa uzoba iibhodi zesekethe ezihamba rhoqo, ukongeza kubunzima obufana nocingo olushicilelweyo lomhlaba, ibhodi yesekethe akufuneki ihlale kuyo yonke indawo njengocingo lomhlaba, ukuze isixhobo sisondele emhlabeni. Oku kunokunciphisa ngokufanelekileyo ukunyanzeliswa kwe-parasitic, ngelixa indawo enkulu yomhlaba inganciphisa ngokufanelekileyo imitha yengxolo. 4, kwibhodi yesekethe eprintiweyo elinye okanye omabini amacala epleyiti yomhlaba
Oko kukuthi, ngesiqwenga sealuminium okanye isinyithi esiqhotyoshelwe kwibhodi yesekethe eprintiweyo ngasemva (indawo yokuwelda), okanye ibhodi eprintiweyo ebanjwe kwiipleyiti ezimbini zentsimbi. Isitya sokumisa sifakwe kufutshane kangangoko kwibhodi yesekethe eprintiweyo kwaye kufuneka sidityaniswe kwi (SG) eyona ndawo iphambili yomqondiso wenkqubo. Olu lwakhiwo lulula kwaye kulula ukwenza uluhlu lweebhodi zebhodi yesekethe eprintiweyo. Ukuba ufuna ukulandela isiphumo esingcono sokucinezelwa, ibhodi yesekethe eprintiweyo inokufakwa kwibhokisi yesinyithi ekhuseleke ngokupheleleyo, ukuze ingavelisi, ungaphenduli kwingxolo.
Amanyathelo ebhodi yekopi yePCB
Inyathelo lokuqala kukufumana isiqwenga sePCB, okokuqala ephepheni ukurekhoda zonke izinto zemodeli, iiparameter, kunye nendawo, ngakumbi i-diode, ulwalathiso lombhobho kathathu, ulwalathiso lwe-IC gap. Kungcono kwikhamera yedijithali imifanekiso emibini kwindawo. Ngoku i-PCB ngakumbi yenza phambili kwi-diode triode, abanye abayikhathaleli ukuba bangaboni ngaphezulu.
Isinyathelo sesibini, qhekeza yonke ibhodi yebhodi elaminethiweyo, itoti kwimingxunya ye-PAD kwaye isuswe. I-PCB icocekile ngotywala, emva koko ibekwe kwiskena, iskena ukuskena xa kufuneka iipikseli eziphezulu zokuskena, ukuze ufumane umfanekiso ocacileyo . Intambo yentsimbi iya phezulu nangaphantsi ngamanzi okusila kancinane, ipolishi ukuya kwifilimu yobhedu, kwiskena, qala iFOTSHOPHOP, unkqonkqoze ii-layings ezimbini ngokwahlukeneyo kwimowudi yombala. Qaphela ukuba i-PCB mayibe nkqo nkqo, ibekwe kwiskena okanye umfanekiso wokuskena.
Inyathelo lesithathu, lungelelanisa umahluko we-tovas, umahluko, ifilimu yobhedu kwaye hayi inxenye yobhedu umahluko wefilimu, emva koko inani lokuqala kumnyama nomhlophe, jonga ukuba umgca ucacile, ukuba awucacanga, phinda eli nyathelo Ukuba icacile, iya kusinda kwi-TOP emnyama nomhlophe. Ifomathi yefayile ye-BMP yeBMP kunye neBOT. I-BMP, ukuba ifumene iingxaki kwimizobo inokulungisa kunye nokulungisa kwi-PHOTOSHOP.
Inyathelo lesine, ifomathi ezimbini ze-BMP kwifomathi yefomathi ye-PROTEL, ngokulandelelana kugqithiso lwe-PROTEL kwiindawo ezimbini, ezinje ngemaleko emibini ye-PAD kunye nendawo ye-VIA eyenzeka ngengozi, amanyathelo aliqela ngaphambi kokwenza kakuhle, ukuba kukho ukuphambuka , emva koko phinda inyathelo le-3 .Ngoko ibhodi yekopi ye-PCB ngumsebenzi wesineke kakhulu, kuba ingxaki encinci iya kuchaphazela umgangatho kwaye ikope ibhodi emva komdlalo.
Okwesihlanu, umaleko we-TOP we-BMP unokuguqulwa ube yi-PCB, ulumke ube ngumaleko we-SILK, umaleko umthubi, emva koko uku-TOP umaleko, kunye nokuzoba isixhobo ngokwenyathelo lesibini. Emva kokuba umzobo ucime umaleko weSILK. Iphindaphindwe yazi ukuzoba zonke iileya.
Inyathelo 6, TOP in PROTEL PCB kunye neBOT. I-PCB ibhanjiwe, igrafu ngokubhekisele ku-OK.
Inyathelo 7, iTOPLAYER eneprinta ye-laser, iBOTTOMLAYER ngokulandelelana eprintwe kwifilimu ebonakalayo (1: 1 ratio), beka ifilimu kwi-PCB, thelekisa iimpazamo, ukuba ewe, ugqibile.
A kunye nembasa yokuqala ibhodi efanayo yekopi yazalwa, kodwa kuphela isiqingatha esenziwe. Uvavanyo, ikopi yokuvavanywa kokusebenza kwetekhnoloji ye-elektroniki iyafana neplate yoqobo. Ukuba igqityiwe. Qaphela: ukuba yipilayer emininzi kwaye icoca ngokucocekileyo ngaphakathi ngaphakathi, ngaxeshanye, phinda amanyathelo, owesithathu ukuya kwesihlanu igama lebhodi yemifanekiso yahlukile, ewe, ifuna ukugqitywa ngokwenani leengqimba , iphaneli ephindwe kabini ilula kakhulu kunebhodi yekopi ye-multilayer, ikopi yeplate enamathela kulungelelwaniso, ke ibhodi yekopi ye-profess-sional ijonge kwaye inyamekile (kubandakanya umngxunya wesikhokelo sangaphakathi kunye nomngxunya wesikhokelo akukho lula ukuvela ingxaki).